Uncategorized Archives - Page 174 of 175 - Tha Dinn Oo
အရေးေ ပျါသတိပေး ခကျြ မွနျမာနိုငျငံအတှငျး သို့ ကန်တာရကြိုငျးကောငျ ဝငျေ ရာကျနိုငျ သညျ့ ဒသေမြား
အရေးပျေါ သတိပေးခကျြ မွနျမာနိုငျငံအတှငျး သို့ ကန်တာရကြိုငျးကောငျ ဝငျရောကျနိုငျသညျ့ ဒသေမြား မွနျမာနိုငျငံရှိ မွို့ပေါငျး ၁၃ ခုကို ကန်တာရ ကြိုငျးကောငျမြားဖွတျသနျးဝငျရောကျနိုငျသော စောငျ့ကွညျ့နရောမြားအဖွဈ အရေး ပျေါသတျမှတျထား။ ကန်တာရကြိုငျးကောငျ အကောငျကွီးမြား၏ အရှယျအစားသညျ အထီး (၄ – ၅) စငျတီ မီတာ၊အမ(၅ – ၆)စငျတီမီတာရှညျလြားပွီး အဝါရငျ့ရောငျ (သို့မဟုတျ) ပနျးရောငျရှိ ကွောငျးနှငျ့ အတောငျပျေါတှငျ အညိုရငျ့ ရောငျ အပွောကျမြား တှရှေိ့ရကွောငျးသိရ သညျ။ အဆိုပါ ကန်တာရကြိုငျးကောငျမြားဖွတျသနျး ညဝငျရောကျနိုငျသော နရောမြားမှာ စဈကိုငျး တိုငျးဒသေကွီး လရှေီး၊ဟုမ်မလငျး၊တမူးနှငျ့ ကခငျြပွညျ နယျတှငျ ပူတာအို၊ မခမျြးဘော ဒသေဖွဈကာ ရခိုငျပွညျနယျတှငျ ဘူးသီး တောငျ၊မောငျတော၊ရသတေ့ောငျ၊စဈတှေ၊ကြောကျဖွူ နှငျ့ ခငျြးပွညျနယျတှငျ တှနျးဇံ၊ထနျတလနျ၊ပလကျဝ […]
သဆေုံးတဲ့သူတှထေဲ မငျးကိုတှလေို့ကျတော့ အကိုမခံစားနိုငျဘူး မငျးပွောခဲ့တဲ့စကားတှလေေးတှကွေောငျ့ ရငျထဲစို့ပွီးအသကျရှုရခကျနတေုနျးပဲကှာ (အကိုယူလိုကျပါဗြာ..ကနြျော့တို့မိသားစုစားဖို့သောကျဖို့အခကျခဲဖွဈနလေို့ အိမျကိုပိုကျဆံပို့ပေးခငျြလို့ပါ တကယျပါအကိုမယုံရငျအိမျကိုဖုနျးဆကျကွညျ့ပါ မဟုတျရငျအကို့ကိုအလကားပေးလိုကျပါ့မယျ အကိုဝယျလိုကျပါဗြာ အကိုအောငျပါစလေို့ဆုတောငျးပေးမယျဗြာတဲ့ အောငျသှားရငျတဈသိနျးလောကျ စတေနာရှိရငျထပျပေးပေါ့ ဟုတျတယျမလာအကိုကွီးတဲ့)ယောင်ျကြာသားဖွဈပေ မကျြရညျဝဲပွီးခွထေောကျ မကိုငျယုံတမယျပဲ မငျးငါ့ကိုတဈသိနျးနဲ့ရောငျးခဲ့တာလကှော 🙁 ညီလေးရေ..မငျးတဈသိနျးနဲ့ရောငျးခဲ့တဲ့ဂဲတုံးလေးက ခုအောငျသှားတယျကှာ သိနျး၂၀၀တောငျရတယျမငျးကြေးဇူ့ကွောငျ့.. မငျးနဲ့အကိုကံဆကျလို့အောငျသှားတယျလို့ယုံကွညျတယျ ဒါကွောငျ့တဈဝကျတိတိကို မငျးမိသာစုကိုပေးမယျလို့ အကိုဆုံးဖွတျလိုကျပွီညီလေး မငျးမိသားစုဘယျမှာနမှေနျမသိပမေဲ့ အကိုရအောငျပေးမယျ စိတျခညြီလေးးးးး သူကိုသိတဲ့လူတှေ ကနြျော့ကိုဖုနျးဆကျပေးကွပါဗြာ MinZawNing 0925 0222948 သူကိုသိတဲ့သူတှနေဲ့ခြိတျဆကျမိအောငျဝိုငျးShareပေးကွပါဗြာ Copy
ပဋိ ပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ ရာ တရုတ်နယ်စပ်ဒေသ သို့ ၀န်ကြီးချုပ် မိုဒီနှင့် အိန္ဒိယစစ်ဘက်အရာရှိကြီးများ ရုတ်တရက်ရောက်ရှိ ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားခဲ့ရာ တရုတ်နယ်စပ်ဒေသသို့ ၀န်ကြီးချုပ် မိုဒီနှင့် အိန္ဒိယစစ်ဘက်အရာရှိကြီးများ ရုတ်တရက်ရောက်ရှိ။ အိန္ဒိယတွင် တရုတ်ဆန့်ကျင်ရေးစိတ်ဓါတ်မြင့်တက်နေ အိန္ဒိ ယနိုင်ငံ ၀န်ကြီးချုပ် နာရင်ဒြာမိုဒီသည် နိုင်ငံ့မြောက်ပိုင်း တရုတ်နယ်စပ် လာဒက်ဒေသရှိ နီမူး စစ်စခန်းသို့ အံ့အားသင့်ဖွယ် ရုတ်တရက်ရောက်ရှိသွားခဲ့ရာ အဆိုပါ အိန္ဒိယစစ်စခန်းမှာ ယခင် ဇွန်လ ၁၅-ရက် တရုတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့ရသည့်နေရာမှ အဖြောင့်တိုင်းလျှင် မိုင် ၆၀ ခန့်သာ ကွာဝေးသည်ဟု AFP အား ကိုးကား၍ Dhaka Tribune က ယနေ့ရေးသားသည်။ ဂယ်လ်ဝမ် တောင်ကြားဒေသ၏ အဆိုပါ ပဋိပက္ခသည် ညူကလီယာလက်နက်ပိုင်ရှင် အိမ်နီးချင်းစစ်အင်အားကြီး ၂-နိုင်ငံအကြား ၄၅-နှစ်အတွင်း […]
ပရိသတျရဲ့အခဈြတျောဖိုးခဈြကတော့ အသကျငယျပမေယျ့ ဦးဆောငျနိုငျစှမျးနဲ့စိတျအားထကျသနျမှုတို့ကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံသဘငျအစညျးအရုံးရဲ့ ဥက်ကဌအဖွဈတာဝနျပေးခွငျးခံထားရသူတဈယောကျပါ။ ကိုဗဈကာလစတငျတညျးသဘငျသညျတှရေဲ့အခကျအခဲကို တတျနိုငျသမြှဖွရှေငျးပေးနသေလို အခုတဈခါမှာလညျး ဖားကနျ့မွပွေိုမှုကွောငျ့ ထိခိုကျနဈနာခဲ့ရတဲ့သူတှကေို ကူညီပေးဦးပါမယျတဲ့ ပရိသတျကွီးရေ။ ဖားကနျ့မှျောတှထေဲမှာတော့ နှဈစဉျမွပွေိုမှုကွောငျ့ လူရာပေါငျးမြားစှာအသကျပေးနရေပွီး လှနျခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးကလညျး ဖားကနျ့ ၊ ဝှခေါမှျောအတှငျးမှာ ဖွဈခဲ့တဲ့မွပွေိုမှုကွောငျ့ လူနှဈရာထကျမနညျးသဆေုံးခဲ့ရတာကိုတော့ ပရိသတျတှလေညျး သိရှိပွီးဖွဈမှာပါ။ ဖိုးခဈြကတော့ သူတို့ကိုကူညီဖို့အတှကျ အစီအစဉျလေးတဈခုပွုလုပျထားကွောငျးကို ” ဖားကနျ့မှာ မွစောပုံပွိုလို့ ထိခိုကျသှားကွရတဲ့ သှေးရငျးသားရငျးမြားအတှကျ online ပရဟိတ ဈေးရောငျးပှဲတျော ကငျြးပပါမယျဗြာ… အရငျးမြားကိုစိုကျထုတျပွီး ရောငျးရသမြှအားလုံးကို လှူဒါနျးပေးသှားပါ့မယျနျော… ကိုယျရှငျသနျနတော အမြားအတှကျ ဖွဈစခေငျြပါတယျ… အားလုံး အနုပညာညီအကိုမောငျနှမတှေ… ကိုယျတိုငျပေးပို့ ရောငျးခသြှားကွမယျ…. အသေးစိတျ ကွညောပေးပါ့မယျဗြာ ကြှနျတျောတို့လကျရာလေးတှေ စားရငျး ကုသိုလျယူနိုငျကွပါစေ” ဆိုပွီး သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာမှာ မြှဝဖေျောပွလာပါတယျ။ပရိသတျကွီးရေ… “ကိုယျရှငျသနျနတော အမြားအတှကျဖွဈခငျြတယျ”ဆိုတဲ့ရညျရှယျခကျြလေးကို […]
လက်သ န့်ဆေးရည် တချို့တွင် အဆိပ်အတော က် ဖြစ်နိုင် ဟု FDA သတိေ ပးပြီ လက် သန့်ဆေးရည်တချို့ထဲမှာ အဆိပ်အတောက်တွေ ပါဝင်နိုင်ခြေရှိတယ်လို့ အစားအစာ နဲ့ ဆေးဝါးစီမံကွပ်ကဲရေး (FDA) က သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ လက်သန့်ဆေးရည် ထုတ်ကုန်တချို့ထဲမှာ အရေပြားကတဆင့် စုပ်ယူပြီး အဆိပ်သင့်စေနိုင်သလို၊ ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်သွားရင် အသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်တဲ့ မီသနောအဆိပ်တွေ ပါဝင်နေနိုင်တယ်လို့ (FDA) က ပြောပါတယ်။ မီသနော ထိတွေ့မိရင် ခေါင်းကိုက်တာ ၊ မူးဝေတာ ၊ အော့အန်တာ၊ သတိမေ့တာ ၊ မေ့မြောတာ နဲ့ လေဖြတ်တာတွေ အပါအဝင် အပြင်းစားလက္ခဏာတွေ ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ESKIBIOCHEM ကုမ္ပဏီထုတ် မီသနောပါတဲ့ လက်သန့်ဆေးရည်တွေကို ပြန်သိမ်းထားပြီဖြစ်ပေမယ့်လည်း ထုတ်ကုန်တချို့ကတော့ စတိုးဆိုင်တွေမှာ […]
တက္ကသိုလ် ဝင်တန်း ကျရှုံးသူ များ ကို အထက် တန်းပြီး မြောက်ကြောင်းလက်မှ တ် ထုတ်ပေး တော့ မည် ယခုနှစ် မှာ စတင်ထုတ်ပေး မှာ ဖြစ်ပြီး ၅သိန်းခွဲခန့်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ ယခုနှစ်မှာ အခြေခံပညာအထက်တန်းပြီးမြောက်ကြောင်းလက်မှတ် ၅သိန်းခွဲလောက် ထုတ်ပေးဖို့ ရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း ကျရှုံးပေမယ့် အထက်တန်းအဆင့် ပြီးမြောက်ကြောင်းလက်မှတ်ကို ယခုနှစ်မှစတင် ထုတ်ပေး သွားမယ်လို့ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာ တင်မောင်ဝင်းက ပြောပါတယ်။“တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲမှာ အခုထိ ၃၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲအောင်တယ်။ကျန်တဲ့ ၇၀က ဘယ်ရောက်သွား ကြလဲဆိုတာ အရင်က မစဉ်းစားခဲ့ကြဘူး။ အခုတော့စဉ်းစားတယ်။ အဲဒီ ၇၀ အတွက် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း မအောင် သော်ငြားလည်း ၁၀တန်းအထိ သင်ယူခဲ့ပါပြီဆိုတဲ့ အထောက်အထားလက်မှတ်ကို ထုတ်ပေးသွားမယ်။ ဒီလက်မှတ် ရတာနဲ့ […]
အောင်မဲညိုပွင့် နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန့်နေ တဲ့သတင်းလိမ်သတင်း မှား
အောင်မဲညိုပွင့် နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန့်နေ တဲ့သတင်းလိမ်သတင်း မှား ဘာအတွက် မို့ လူတွေကို သတင်းမှား၊သတင်းတုတွေကို လိမ်ပြီး ပေးချင်ရတာလဲဗျာ။￼ ဒေါက်တာ ဂျိုးဇက်စော ( ခေတ္တနယူးယောက် )ရေးတယ်ဆိုပြီး သတင်းတုတစ်ခု တက်လာပါတယ်။တအားဝိုင်းပြီး ရှဲလ်နေကြတာ။ ဒီလောက်ဆေးဖက်ဝင်ပြီး အသည်းကင်ဆာကုဆေးတောင်ဖော်နေကြတဲ့ အောင်မဲညိုပန်းက အသည်းကင်ဆာဖြစ်စေတယ်ဆိုပြီး သတင်းလိမ်ထားတာ တော်တော်လွန်လွန်းနေပြီ။ အောင်မဲညိုကို butterfly pea flower လို့ခေါ်ပြီး Fabaceae မျိုးရင်းက ဆိုတာကလွဲလို့ ရေးထားတာတစ်လုံးမကျန် သတင်းလိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာကြီးဦးခင်မောင်ဝင်းကို အသုံးချထားတာ လွန်လွန်းပါတယ်။ ဒီအပွင့်ထဲမှာ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ Benzene တစ်မှုန်မျှမပါဝင်ပါ။ ထပ်ပြီးတော့ FAME စတဲ့ဆေးဝါးသုတေသနစက်ရုံတွေ ဘာညာ စသည်ဖြင့် သူရေးတာကို ခိုင်မာအောင် ထပ်လိမ်ရေးပါတယ်။ အောင်မဲညိုပွင့်ကို ကမ္ဘာတစ်လွှား Caffeine free herbal tea […]
မိုးအေးလို့ လေးဘကျနာသမား အဆဈအမွဈတှကေိုကျနလြှေငျ။
(Zawgyi) လေးဘကျနာရောဂါ ပြောကျတဲ့ဆေး၊ သကျရှညျအားဆေးလေး မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။ ဤနညျးလေးက လေးဘကျနာချေါ အဆဈရောငျ အဆဈနာရောဂါ ခံစားနသေူတို့ အငျအားရှိ၍ ပိတျဆို့မှုကို ပြောကျကငျးစနေိငျသညျ့ အတှကျ တငျပွလိုကျပါသညျ။ မနျကြီးသီး ၁၅ ကပျြသား ဂငျြး၅ ကပျြသား စပါးလငျ၂ပငျ ကွကျသှနျဖွူ ၆ လုံး ထနျးလကျြ ၁၂ ကပျြသား ရသေနျ့ တဈလီတာခှဲထညျ့ ပွုတျ။ ဆူရငျခြ အအေးခံ တနကေုနျသောကျပါ။ ဝမျးပြော့ပြော့သှားရငျ ခဏနား။ ပွီးရငျ ဆကျသောကျ။ နှဈပတျအထိပေါ့။ ပွီးတော့ ည မနကျ ဆားမနျကြီး ပွုတျရညျခြိုးပါ။ေ ရသနျ့ ငါးဗူးခွောကျဗူးလောကျကို ဆူအောငျတညျ့။ ဆားတဈပိသာခှဲထညျ့ ဆားရညျပြောရငျ မနျကြီးရှကျ ရတေဈဖလားစာ ထညျ့ အိုးအဖုံး ဖုံး မီးဖိုပျေါက […]
Posted on July 4, 2020 July 4, 2020 Author admin	Comments Off on မိုးအေးလို့ လေးဘကျနာသမား အဆဈအမွဈတှကေိုကျနလြှေငျ။
(Zawgyi) ကြက်သားစားရင် ဘာလို့အနာကျက်မြန်တာလဲ ကိုယ့်မှာ ထိခိုက်အနာတရတစ်ခုခုရှိနေပြီဆိုရင် အမေအမြဲပြောတယ်မလား။ ကြက်သားစားမှ အနာမြန်မြန်ကျက်မှာဆိုပြီးလေ။ ငယ်တုန်းကဆို ခဏခဏဒူးပြဲ၊ နဖူးကွဲ၊ လက်နဲ့ခြေထောက်ထိခိုက်ပွန်းပဲ့တာတွေ ဖြစ်ဖူးကြမှာပဲဆိုတော့ ကြက်သားတွေစားခဲ့ရမှာသေချာပါတယ်။ ကိုယ်က သတိမထားမိခဲ့တာပဲရှိမှာပါ။ ကြက်သားစားရင် အနာက အသားတက်တာမြန်တယ်တဲ့။ အရွယ်ရောက်လာတော့ ဒီလိုကြားရရင် သိပ်မယုံချင်တော့ဘူး။ ကြက်သားစားရင် အားရှိတာကလွဲလို့ အနာနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ တွေးမိလာတယ်။ တကယ်က ဒီအချက်က မှန်ပါတယ်။ ကြက်သားမှာ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ ပရိုတင်းကြောင့်ပါ။ အနာကျက်ခြင်းဖြစ်စဉ်အပေါ် သက်ရောက်မှုရှိနိုင်တဲ့အချက်တွေက အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သန့်ရှင်းမှု၊ မှန်ကန်တဲ့ ဂရုစိုက်မှု၊ ဖုံးအုပ်ကာကွယ်မှုတို့လို အချက်တွေအပြင် စားသောက်မှုအာဟာရကလည်း အရေးပါတယ်ဆိုတာ မမေ့သင့်ပါဘူး။ သင့်တင့်လုံလောက်တဲ့ အာဟာရတွေစားသုံးဖို့ ဂရုမစိုက်ရင် အနာကျက်နိုင်စွမ်းကို နှောင့်နှေးစေပြီး အနာရင်းစေနိုင်၊ အမာရွတ်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ညီညွတ်မျှတတဲ့ ဂလူးကို့စ်ပမာဏ၊ ဗီတာမင် C […]
Posted on July 4, 2020 July 4, 2020 Author admin	Comments Off on ကွကျသားစားရငျ ဘာလို့အနာကကျြမွနျတာလဲ
ဂငျြးနကျ အစှမျး (မွနျမာအချေါ နနှငျးနကျ) အစှမျး အံ့မခမျး
(Zawgyi) ဂျင်းနက် အစွမ်း (မြန်မာအခေါ် နနွင်းနက်) အစွမ်း အံ့မခမ်း ဂျင်းနက် အစွမ်း (မြန်မာအခေါ် နနွင်းနက်) ဂျင်းနက် (တိုင်းရင်းဆေးကောင်းကြီး) အင်္ဂလိပ်အမည် Black Ginger ထိုင်းအမည် Kra chai Dum (ထိုင်းဂျင်ဆင်း) သိပ္ပံအမည် Kaempferia parviflora Wall. ex Baker. Synonym(s): Kaempferia rubromarginata (S.Q.Tong) R.J.Searle Stahlianthus rubromarginatus S.Q.Tong မျိုးရင်း Zingiberaceae (ဂျင်းမျိုးရင်း) မူရင်းဒေသ ထိုင်း။ ပေါက်ရောက်ရာဒေသ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ မြန်မာ၊ ထိုင်း၊ ကမ္ဘောဒီးယား။ ပုံပန်းသဏ္ဍန် ပင်စည်မရှိသော သစ်မြစ်သစ်ဖု ဆေးဖက်ဝင်အပင်ဖြစ်ပြီး ၈လက်မ ဝန်းကျင်အမြင့်ရှိပါတယ်။ အမြစ်ဥက သေးငယ်ပြီး ပြာနက်သော အဆင်းရှိပါတယ်။ […]
Posted on July 4, 2020 July 4, 2020 Author admin	Comments Off on ဂငျြးနကျ အစှမျး (မွနျမာအချေါ နနှငျးနကျ) အစှမျး အံ့မခမျး